Waa maxay server biraha qaawan? Noocyada iyo adeegsiga. | Abuurista khadka tooska ah
caloolxumo | | Naqshadeynta Webka
Xaqiiqdii waad maqashay mashruuca yurubiyanka GAIA-X. Iyo, adduunyada nacaybka badan leh, ee xogtaada lagu kaydiyo laguna ixtiraamo sharciga ilaalinta xogta Yurub waa muhiim.
Sidoo kale, waxa aan ugu yeerno daruur ma ahan wax aan la taaban karin, waa wax jireed, waxaana laga helaa xarumaha xogta waaweyn. Sidaa darteed, haddii aad ka mid tahay kuwaas waxay daryeelaan arrimaha asturnaanta iyo meesha dhammaan macluumaadkaagu ku yaal shaqsiyeed ama ganacsi, waa inaad sifiican ula socotaa adeeg bixiyaha aad dooratay ...
1 Waa maxay adeegaha biraha-qaawan?
2 Sidee loo doortaa adeege khaas ah?
3 Astaamaha iyo Isticmaalka
Waa maxay adeegaha biraha-qaawan?
ka server biro-qaawanama server u heellanWaa nooc adeeg ah oo ku siinaya qalab heersare ah, halkii aad ka isticmaali lahayd server-yo wadaag ah dhowr macaamiil oo loo qaybiyay iyadoo la adeegsanayo VPS (Virtual Private Server). Sidaa darteed, waxay leedahay faa'iidooyin qaar, sida:
Ka raqiisan dhamaadka-sare (heer-sare) marka loo barbar dhigo VPS, lacag baa kuu badbaadinaysa.
Waxqabadka adiga oo aan haysan lakabyo heer sare ah ama wadaagno kheyraad qalab, kuwa raadinaya wax lagu daray.
Xayeysiis ballaadhan oo heersare ah, markaa way u fiican tahay macaamiishaas u baahan taraafikada badan.
Waxaa laga soo qaatay labadii qodob ee hore waxaad heli doontaa TTFB dhaqso badan (Waqtiga Koowaad).
Dabacsanaanta kafiican iyo ismaamulka, lahaanshaha xakamaynta buuxda.
Adag iyo xasilooni weyn markii la hibeeyo. Taasi waa, waxay u shaqeysaa sidii inaad adigu laheyd xarun xogeed kuu gaar ah, laakiin kharash la'aan aad u weyn inaad iibsato qalabka aadna dayactirto.
Suurtagalnimada in si fudud loo kobciyo iyadoo la ballaarinayo adeeggaaga.
Sidaa darteed, adeegaha heeganka ah wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay kuwa u baahan martigelinta ama nooc kale oo adeeg daruur ah oo qorsheynaya inay yeeshaan tiro badan oo marinno ah. Taasi waa, kuwa aan VPS ku filneyn, sida bogagga internetka ee shirkadaha waaweyn, ganacsiga elektaroonigga ah, baloogyada leh booqashooyin badan, iwm.
Sidee loo doortaa adeege khaas ah?
Si aad u awooddo dooro adeege u heellan, waa inaad maskaxda ku haysaa qodobo muhiim ah:
processor- Adeegyaashani waxay leeyihiin processor-yaal badan. Iyaga ayaa mas'uul ka noqon doona ka baaraandegidda xogta, sidaa darteed, waa inaad doorataa mashiin leh waxqabad ku filan iyadoo loo eegayo ujeeddadaada.
RAM: Waxaa muhiim ah inaad haysato qadar macquul ah oo ah xusuusta ugu weyn, maadaama qaska nidaamka uu sidoo kale ku xirnaan doono. Sidoo kale, waa inay lahaato daahitaan ugu hooseeya ee suurtogalka ah.
Kaydinta: Waxaad xal uga heli kartaa qalabka adag ee adag ee magnetic-ka loo yaqaan (HDD), ama xalal dhakhso leh oo leh xaalad adag oo adag (SSD). Nooca teknolojiyadda ka sokow, sidoo kale waxaa muhiim ah inaad doorato awoodda ku habboon ee yoolalkaaga. Dabcan, noocyadan xalalka ah uma baahnid inaad ka walwasho xogtaada sidoo kale, maadaama ay badanaa leeyihiin nidaamyo xad-dhaaf ah (RAID), sidaa darteed xitaa haddii disk disk uu fashilmo, waa la beddeli karaa iyada oo aan saameyn ku yeelan xogtaada.
Nidaamka hawlgalka: Waa qodob kale oo muhiim ah, in kasta oo xalal badani doortaan nidaamyada hawlgalka ee GNU / Linux, oo bixiya nabadgelyo weyn, xoog iyo degganaansho. Qaarkood sidoo kale waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay adeegsadaan Windows Server, haddii aad u baahato nidaam gaar ah sababo jira awgood.
Ancho de banda: arrin kale oo aad muhiim u ah, maadaama xaddidaadda gudbinta xogta ay ku xirnaan doonto iyada. Waa inaad doorataa xalka ku habboon mugga aad filayso in la dhaqaajiyo.
GDPR- Sidii aan ku sheegay bilowgii, xulashada adeege khaas ah ayaa badiyaa ah ikhtiyaar wanaagsan oo lagu hubinayo inay ixtiraamayso sharciga ilaalinta xogta Yurub.
kuwa kale: waxaad u maleyneysaa inaad sidoo kale xiiseyneyso inaad falanqeyso nooca guddiga xakamaynta la bixiyo, adeegyo dheeri ah oo uu bixiyo bixiyaha, iwm.
Hadaadan wali sifiican uga cadeyn waxyaabaha la adeegsan karo ee loo siin karo server gaar u ah sida OVHcloud, waa inaad ogaataa kuwan adeegyada iyo codsiyada suurtogalka ah:
Kaca: Waa adeegga ugu jaban, ee loogu talagalay baahiyaha martigelinta ama martigelinta websaydhka, gudbinta, faylalka faylalka, ama codsiyada ganacsiga. Iyada oo leh xawaare sare, awood sare, iyo processor Intel Xeon.
Xilli hore: adeegga si gaar ah loogu talagalay shirkadaha yaryar ee u baahan in ay maalgashadaan server-yo badan, oo leh waxqabad sarreeya, RAM aad u tiro badan, iyo ballaadhin xad-dhaaf ah. Tusaale ahaan, kuwa doonaya inay martigeliyaan websaydhyada shirkadaha, dukaamada elektaroonigga ah, barnaamijyada ganacsiga (ERP iyo CRM), farsamaynta, iwm.
kaydinta. Iyada oo leh awood ballaaran (illaa 504TB), suurtagalnimada in la kala doorto NVMe SSDs, helitaan sare oo had iyo jeer la helo xogtaada, iyo wada shaqeyn sare.
Game: Noocan ah serverka heeganka ah ee ka socda OVHcloud waxaad ku heli kartaa server-kaaga ciyaarta fiidiyowga kuu gaarka ah, lagana ilaaliyo weerarada DDoS iyo kuwa awoodda badan leh ee AMD Zen processor-ka 2. Tusaale ahaan, waxaad ku fulin laheyd server-ka Minecraft, ama martigaliye barnaamijyada socodka
Infrastructure: noocyo badan oo ka mid ah server-yo u gaar ah oo leh hawl-wadeenno awood leh oo aad ku dhisi kartid kaabayaal aad u gaar ah shirkadaha tikniyoolajiyadda, xarumaha cilmi-baarista, ama jaamacadaha ay ka jirto awoodda xisaabinta, keydinta iyo waxqabadka shabakadda.
Range Sare- Qaabdhismeedka ugu awoodda badan dhammaan adeegyada, oo si gaar ah loogu talagalay hay'adaha u baahan adeegsiga degdegga ah ama bay'adaha muhiimka ah. Tusaale ahaan, barnaamijyada dalbanaya kheyraadka sida Xogta Weyn, Mashiinka Barashada, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Waa maxay server biraha qaawan?